नेपालमा एउटा ठूलो धार्मिक क्रान्तिको सम्भावना देखिन्छ - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
ज्योतिषी हरिहर अधिकारी उमेरले २६ वर्षका मात्र भए, तर चर्चाका हिसाबले उनी नेपालमा मात्र सीमित छैनन्, ज्योतिष विधामा नेपाल बाहिर पनि उनको नाम छ । हरिहर सामाजिक सञ्जालमा फ्यान फलोइङको भव्यता र आफूले हासिल गरेका पुरस्कार तथा उपलब्धिका कारण सानै उमेरमा यो उचाइमा पुग्ने विरलै ज्योतिषीहरूमध्ये एक हुन् । विभिन्न देशमा भएका फरक–फरक सम्मलेनमा उनले प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय एवार्डमध्ये बेस्ट एस्ट्रोलोजर अफ नेपाल–२०१५, बेस्ट एस्ट्रोलोजर अफ एसिया–२०१६, म्यान अफ दि इयर इन एस्ट्रोलोजी–२०१६ तथा बेस्ट रिसर्च इन एस्ट्रोलोजी–२०१६ महत्वपूर्ण छन् ।
उनलाई अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युटले सन् २०१८ का लागि नेपालको ब्रान्ड एम्बेसडर समेत नियुक्त गरेको छ । ज्योतिष विज्ञानलाई अवैज्ञानिक तथा परम्परागत भन्ने ठूलो जमातका बीच उनी त्यही ज्योतिष विज्ञानभित्रका वैज्ञानिक पक्षलाई खोतलेर निरन्तर चर्चामा छन् । साइन्सका विद्यार्थी ज्योतिषी अधिकारीसँग ज्योतिषशास्त्र तथा अंकविज्ञानका आधारमा मुलुकमा संविधान जारी भएको मिति, पार्टी एवं शीर्ष नेताहरूको नाममा आधारित रहेर उनीहरूको भविष्यका सम्बन्धमा गरिएको कुराकानी :
नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकको अवस्था कता तिर जाने देखिन्छ ?
संविधान जारी भएको दिनको राशि तथा देशको राशि समान वृश्चिक राशि हो । सप्तमी तिथिका दिन आइतबार नेपालको संविधान जारी भएको हो । सप्तमी सूर्यको तिथि हो, सूर्यको तिथि भएकाले यो पावरफूल हुन्छ । यो संविधानमाथि आँच आउने किसिमको घटना हुने सम्भावना छैन । जारी भएदेखि २०७३ साल फागुन ६ गतेसम्म राहु चलेको थियो । राहु चलेका कारण विभिन्न खालका अवरोध भए होलान्, नाकाबन्दी, आन्दोलन र संविधानका विरुद्ध विभिन्न व्यक्ति तथा पार्टीहरू जाने कुरा पनि भयो होला । २०७३ फागुन ६ गतेदेखि २०७६ सालको जेठ १२ गतेसम्म बृहस्पति चल्ने भएकाले सबै कुरा सामान्य नै चल्ने देखिन्छ । २०७६ साल जेठ १२ गतेदेखि २०७८ सालको माघ १९ गतेसम्म शनि चल्नेछ । शनि धर्मकर्ममा गएर बसेको छ, तसर्थ धार्मिक क्रान्तिको सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यतिबेला विदेशी चलखेलसमेत बढ्नेछ ।
बृहस्पति चल्दा के–के हुन्छ ?
बृहस्पतिमा शिक्षामूलक कुराहरू बढी हुन्छन् । बृहस्पति मंगलसँग गएर बसेको छ रोगस्थानमा, जसका कारण बृहस्पति त्यति धेरै स्ट्रङ चाहिँ छैन । बृहस्पतिको किरण १५ डिग्रीमा छ, जुन सिंह राशिमा गएर बसेको छ, यसका कारण यो सामान्य बृहस्पति भयो । त्यसैले यो अवस्थामा शिक्षामा देशले निकै ठूलो उन्नति–प्रगति गर्नुपर्ने हो तर बृहस्पति केही कमजोर हुँदा शिक्षामा पनि त्यति धेरै प्रगति हुँदैन । २०७६ साल जेठसम्म अर्थलाई हेर्ने ग्रह बुध हो, बुध बृहस्पतिको अन्डरमा र बुधको किरण १० डिग्रीमा रहेकाले देशको अर्थतन्त्र पनि सामान्य नै रहनेछ । यसबीच कुनै पनि ठूलो आर्थिक क्रान्ति हुने सम्भावना देखिँदैन । २०७६ साल जेठसम्म राजनीति पनि सामान्य अवस्थामै चल्नेछ ।
२०७८ सालपछि देशको अवस्था कस्तो होला त ?
२०७९ सालसम्म केतु छ, त्यसपछि फेरि शुक्र चल्नेछ । त्यहाँ केही गडबड छ । २०८० सालमा सूर्य चलेपछि मात्र देशमा स्थिरताको अनुभूति हुनेछ । देशका सबै अब्स्ट्याकल हट्न अझै ६ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । २०८० साल भदौ १५ पछि बल्ल स्थिरता हासिल हुँदै जान्छ । २०९० साल जेठ २१ सम्म मुलुकका लागि निकै राम्रो समय छ, किनभने यतिबेला सूर्य चल्छ । राजनीतिक रूपमा देश निकै राम्रो हुनेछ ।
निर्वाचनको अवस्था कस्तो छ ?
असोजदेखि माघसम्म बुध चलिरहेको छ, यतिबेला निर्वाचन भयो भने राम्रै हुन्छ । माघ
कट्यो भने निर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन ।
निर्वाचनमा पार्टीहरूको प्रभाव कस्तो रहला ?
ज्योतिषशास्त्रले ९, ७ तथा ३ अंकलाई शुभ मान्छ भने ६, ८ र १२ खराब मानिन्छन् । पार्टीको नामका आधारमा सम्भावना हेर्दा त्यसमा पनि ९ सबैभन्दा राम्रो, त्यसपछि ७ र ३ राम्रो मानिन्छ । प्रमुख पार्टीहरूको नामको सुरुवात ‘ने’ बाट सुरु हुन्छ— नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी । त्यसैले यहाँ पार्टीको नामको दोस्रो शब्दलाई लिएर ज्योतिषशास्त्र तथा अंक विज्ञानका आधारमा विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीको नामका आधारमा यसको विश्लेषण गर्दा यथार्थसँग बढी नजिक हुन सकिन्छ । निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले अगाडि देखिन्छन् । यी दुवैको ९/९ प्वाइन्ट आएको छ । माओवादीको भने ७ प्वाइन्ट छ । राप्रपा निकै कमजोर छ, नयाँ शक्तिको ४ आएको छ, त्यसलाई पनि च्यालेन्जका रूपमा लिन सकिँदैन ।
नामका आधारमा शीर्ष नेताहरूको अवस्था कस्तो देखिन्छ ?
ज्योतिषशास्त्रका हिसाबले शीर्ष नेताहरूको नाम कत्तिको पावरफूल छ भन्ने अंकविज्ञान र ज्योतिषशास्त्रबाट हिसाब गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ४ नम्बर आउँछ । यो त्यति बलियो नम्बर होइन । केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र कमल थापाको समान ९/९ नम्बर भएकाले यी तीन नाम पावरफूल देखिए । बाबुराम भट्टराईको १० नम्बर आउँछ, त्यसलाई हामी न्युरोलोजीबाट सिंगलमा ल्याउँछौं, त्यसैले उनको १ नम्बर आउँछ । उपेन्द्र यादवको ३ नम्बर राम्रो मानिन्छ भने महन्त ठाकुरको ६ नम्बर आउँछ जसलाई राम्रो मानिँदैन । रवीन्द्र मिश्रको ५ नम्बर आयो, यसलाई ठीकै मानिन्छ । कमल थापा नामका हिसाबले बलिया देखिए पनि पार्टीका हिसाबले कमजोर देखिएका छन् । त्यसैले राम्रो अंक आएका नामहरूले राम्रो गर्न सक्ने र अघि बढ्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नाम र पार्टीलाई जोडेर हेर्दा नाम बलियो तर पार्टी कमजोर भयो भने त्यो व्यक्तिले राम्रो गर्न सक्छ, तर पार्टी अघि नबढ्न सक्छ । पार्टी बलियो, नाम कमजोर भयो भने पार्टी अघि बढ्न सक्छ, त्यो नाम भएको व्यक्ति पछाडि पर्न सक्छ । पार्टी र नामलाई जोड्दा केपी र पुष्पकमल बलिया देखिए, नाम मात्रमा कमल थापा पनि बलिया देखिए ।
शीर्ष नेताहरू कुन दिशाबाट चुनाव लड्दा राम्रो होला ?
जन्मिएको ठाउँ र नामका आधारमा हिसाब गर्दा शेरबहादुर देउवालाई पश्चिमबाट राम्रो देखिन्छ । केपी शर्मा ओलीलाई दक्षिण वा उत्तर राम्रो हुने देखिन्छ । पुष्पकमल दाहालले दक्षिण–पूर्वबाट चुनाव लड्नु उपयुक्त हुन्छ भने बाबुरामका लागि उत्तर शुभ छ । उपेन्द्र यादवलाई पश्चिम तथा महन्त ठाकुरका लागि पूर्व दिशा उपयुक्त देखिन्छन् । रवीन्द्र मिश्रलाई जन्मिएको ठाउँबाट पूर्व र उत्तर–पश्चिम ठीक हुने देखिन्छ भने कमल थापालाई दक्षिण–पश्चिम दिशा फाप्ने छ ।
काठमाडौंमा कुन पार्टी प्रभावकारी होला ?
पार्टीको नाम र ठाउँको नामबाट ज्योतिष र अंक विज्ञानका आधारमा हिसाब गर्दा माओवादीको ३ अंक आयो, यसलाई शुभ मानिन्छ । कांग्रेसको ४ अंकलाई शुभ मानिँदैन । एमालेको ७ अंक आयो, यो पनि राम्रो अंक मानिन्छ । राप्रपाको ८ अंक आयो भने संघीय समाजवादी फोरम र साझाको ५/५ तथा नयाँ शक्तिको ६ अंक आयो । ९ कसैको पनि आएन, एमालेको ७ आएको छ, त्यो पार्टीका हिसाबले हेर्दा राम्रो देखिन्छ । साझा र संघीय समाजवादीले ५–५ अंक ल्याएका छन्, जसलाई ठीकै मानिन्छ । ४ अंकलाई खासै राम्रो नमानिने भएकाले कांग्रेसको राम्रो देखिएन, माओवादीले ३ अंक ल्याएका कारण उसका लागि पनि ठीकै देखिन्छ ।
प्रदेशका आधारमा कसले कुन प्रदेशमा कति सिट जित्लान् ?
प्रदेश नंं. ७ मा पार्टीको नाम र प्रदेश नम्बरका आधारमा हिसाब गर्दा कांग्रेस र एमाले बलिया देखिएका छन् भने त्यसपछि माओवादी छ । ६ नं. प्रदेशमा माओवादी राम्रो देखिएको छ भने एमाले र कांग्रेस बराबर देखिएका छन्, त्यसपछि साझा र संघीय समाजवादी देखिन्छन् । ५ नम्बर प्रदेशमा भने राप्रपा, संघीय समाजवादी र माओवादी राम्रो देखिएका छन्, त्यसपछि कांग्रेस देखिन्छ । एमाले भने पछि परेको पाइन्छ । ४ नम्बर प्रदेशमा साझा पार्टी, माओवादी र त्यसपछि कांग्रेस तथा एमाले देखिएका छन् । पार्टीको नामका आधारमा ३ नम्बर प्रदेशमा भने राप्रपा, संघीय समाजवादी तथा नयाँ शक्ति राम्रो देखिएका छन् भने एमाले र कांग्रेस त्यसपछि छन् । यसमा माओवादी अझ राम्रो देखिएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा माओवादी र संघीय समाजवादी राम्रो देखिएका छन् भने त्यसपछि कांग्रेस देखिन्छ । १ नं. प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस राम्रो अवस्थामा छन् । अरूको अवस्था सामान्य मात्र छ । यद्यपि यो कुरा ती पार्टीले ती क्षेत्रमा गर्ने प्रयासमा पनि भर पर्छ । ज्योतिषीय दृष्टिले राम्रो छ भन्दैमा उम्मेदवार नै नउठाई राम्रो हुने भन्ने कुरा हुँदैन ।
संघीय समाजवादी फोरम तथा राजपाको अवस्था कस्तो होला ?
संघीय समाजवादीको अवस्था राम्रो देखिन्छ । राजपाको अवस्था भने सामान्य पाइन्छ ।
(राजनीतिक भविष्यवाणीको अभ्यास नगर्ने वा गर्न नरुचाउने हरिहर अधिकारीद्वारा देशको राजनैतिक सम्भावनामाथि गरिएको यो पहिलो ज्योतिषीय विश्लेषण हो । अधिकारीका अनुसार नयाँ संविधान जारी भएको तिथिमिति एवं निर्वाचनको पहिलो चरणको मिति नै यो भविष्यवाणीको आधार हो ।)